सधैँ मेरो गुनगान गर्नु पर्दैन : नायक प्रदीप खड्का
Tue, Jun 19, 2018 | 12:17:43 NST
10:46 AM ( 8 months ago )
खै ! यो म आफैले बुझिरहेको छैन । हुन त यो मलाई मात्र होइन सबैलाई हुन्छ । अहिले ‘छक्का पन्जा २’ को पनि त्यस्तै छ । तर, यो टार्गेट गर्ने तरिका हो जस्तो मलाई लाग्छ ।
यसमा कस्तो हुन्छ भने यदि गल्ती गरेको छ भने अवश्य पनि स्वीकार्नु पर्छ । गल्ती नगर्दा पनि कसैले आलोचना गर्‍यो वा आक्षेप लगायो भने चाहिँ एकदमै असैह्य हुने रहेछ । न बिराउनु न डराउनु भन्छन् नि ! आफूले नराम्रो हुने केही गरेको छैन तर कोहीबाट हेपिइरहेको छ भने आत्म सम्मानमा ठेस पुग्दो रहेछ । सहनु पनि एक किसिमको अपराध नै हो जस्तो मलाई लाग्छ । कसैले दमन गर्छ र पेल्न खोज्छ भने सहेर बस्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्दैन । गल्ती गरेको छ भने मात्र डराउने हो । मेरा बारेमा जुन शब्द चयन गरेर खबर छापिएको छ, त्यो मसँग पावर छ जुन बेला चायो म तिमिहरुलाई माथि लैजान र तल झार्न पनि सक्छु भनेर देखाएको पो हो कि ! हामीले चाह्यौँ भने जे पनि गर्न सक्छौँ भनेर देखाएको जस्तो मलाई लागेको छ ।
मिडियासम्म तपाईंको चुरीफुरी बढ्यो भन्ने कुरा कसरी आइपुग्यो त ?
त्यो शब्द चयन कस्तो खालको हो ? त्यस भित्रको न्यूज के हो ? यो कुरा मैले पनि बुझ्नै सकेको छैन । मैले यसको विषयमा स्ट्याटस पनि लेखेको थिएँ । त्यो मलाई न्यूज जस्तो पनि लाग्दैन । गसिप जस्तो पनि लाग्दैन । आर्टिकल जस्तो पनि लाग्दैन । जम्मा एक हरफको मात्र छ । कसैले रिस उठेर फेसबुकमा स्ट्याटस लेखेको जस्तो छ । टाइटल त्यही माथि त्यस्तो खालको छ । अनि अब लेख्ने को हो ? के हो ? उसले आफ्नो नाम पनि राखेको छैन त्यहाँ । नेपालको सबै भन्दा ठूलो मिडिया मानिएको कान्तिपुरले यस्तो खबर लेखेको छ । कसैले यस्तो ठूलो मिडियालाई स्वार्थ अनुरुप प्रयोग गरिरहेको हो कि ! मैले जे कामगर्दा पनि नकारात्मक लेखिदिने उसको भावना नै गलत हो जस्तो मलाई लाग्छ । यो लेखकले मलाई हेर्ने नजर नै खराब रहेछ जस्तो लाग्यो ।
त्यसो भए नेपाली मिडियाले अलिकति आक्रमक भएर नकारात्मक कुरालाई बढी प्राथमिकता दिँदै गएको हो ?
त्यो सानैदेखि फरक पर्ने कुरा हो जस्तो मलाई लाग्छ । उ यदि राम्रो वातावरणमा हुर्केको छ भने उसले संसार नै राम्रो देख्छ । आफू मै खराबी भएपछि उसले सबैमा खराबी देख्छ ।
- उज्यालो र गफगाफ डट कमको सहकार्यमा